Jeremaya 49 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
49 Nke a bụ ihe Jehova kwuru banyere ụmụ Amọn:+ “Ọ̀ bụ na Izrel enweghị ụmụ, ka ọ̀ bụ na Izrel enweghị onye ga-eketa ihe ya? Gịnị mere Malkam+ ji weghara Gad,+ gịnịkwa mere ndị na-efe ya ji biri n’obodo ndị dị n’Izrel?”+ 2 “‘Ya mere, lee! oge na-abịa,’ ka Jehova kwuru, ‘mgbe m ga-eme ka a nụ ụda opi agha,+ bụ́ agha a ga-ebuso Raba+ nke ụmụ Amọn; ọ ga-aghọ mkpọmkpọ ebe nke a lara n’iyi,+ a ga-agbakwa obodo nta ya niile+ ọkụ.’+ “‘Izrel ga-eweghara obodo nke ndị weghaara obodo ya,’+ ka Jehova kwuru. 3 “‘Tie mkpu ákwá,+ gị Heshbọn,+ n’ihi na e bukọrọwo ihe E-aị nwere! Tienụ mkpu ákwá, unu obodo nta ndị dị na Raba. Keenụ ákwá iru uju n’úkwù.+ Tienụ mkpu ákwá, wagharịanụ n’ogige anụ ụlọ ndị e ji nkume gbaa, n’ihi na a ga-adọrọ Malkam n’agha,+ ya na ndị nchụàjà ya na ndị isi ya.+ 4 Gịnị mere i ji jiri ndagwurugwu gị dị iche iche, bụ́ ndagwurugwu gị mmiri na-asọ, na-etu ọnụ,+ gị ada na-ekwesịghị ntụkwasị obi, gị onye tụkwasịrị akụ̀ ya obi,+ na-asị, “Ònye ga-abịa n’ebe m nọ?”’”+ 5 “‘Lee, m ga-eme ka ihe dị egwu si n’aka ndị niile gbara gị gburugburu bịakwasị gị,’+ ka Ọkaakaa+ Onyenwe anyị, bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha, kwuru. ‘A ga-achụsasị unu, chụga onye nke ọ bụla n’ebe o chere ihu,+ ọ dịghị onye ga-akpọkọta ndị gbara ọsọ.’” 6 “‘Ma, e mesịa, m ga-akpọkọta ụmụ Amọn a dọọrọ n’agha,’+ ka Jehova kwuru.” 7 Nke a bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru banyere Idọm: “Ọ̀ bụ na amamihe adịkwaghị+ na Timan?+ Ndụmọdụ ọ̀ kọwo ụkọ n’ọnụ ndị nwere nghọta? Amamihe ha ò rewo ure?+ 8 Gbaanụ ọsọ!+ Gbapụnụ! Gbamienụ agbami gaa zoo,+ unu ndị bi na Didan!+ N’ihi na m ga-eme ka ọdachi Isọ dakwasị ya, bụ́ oge m ga-elebara ya anya.+ 9 Ọ bụrụ na ndị na-aghọ mkpụrụ vaịn abata n’ime gị, ọ̀ bụ na ha agaghị aghọfọ mkpụrụ? Ọ bụrụ na ndị ohi abịa n’abalị, ha ga-ewere naanị ihe ndị ha chọrọ.+ 10 Ma mụ onwe m ga-agba Isọ ọtọ.+ M ga-ekpughe ebe nzuzo ya niile,+ ọ dịghịkwa onye ga-enwe ike izo.+ A ga-ebukọrọ ihe ụmụ ya na ihe ụmụnne ya na ihe ndị agbata obi ya,+ ọ gakwaghị anọ.+ 11 Hapụ ụmụaka na-enweghị nna, bụ́ ndị nọ n’ime gị.+ M ga-echebe ha ndụ, ndị inyom di ha nwụrụ ndị nọ n’ime gị ga-atụkwasị m obi.”+ 12 N’ihi na nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Lee! Ọ bụ ezie na ịṅụ iko a amaghị ha ahụ́, ha aghaghị ịṅụ ya.+ À ga-ahapụ gị onwe gị kpamkpam n’enyeghị gị ntaramahụhụ? A gaghị ahapụ gị n’enyeghị gị ntaramahụhụ, n’ihi na ị ghaghị ịṅụ ya.”+ 13 “N’ihi na ejiriwo m onwe m ṅụọ iyi,”+ ka Jehova kwuru, “na ọ dịghị ihe ọzọ Bọzra+ ga-aghọ ma ọ bụghị ihe ijuanya,+ ihe nkọcha, ihe a lara n’iyi na ihe a bụrụ ọnụ; obodo ya niile ga-aghọkwa ebe a lara n’iyi ruo mgbe ebighị ebi.”+ 14 E nwere ozi m nụrụ nke si n’ebe Jehova nọ, e nwekwara onye ozi e zigara n’etiti mba dị iche iche, ọ na-asị: “Zukọtanụ, busonụ ya agha, biliekwanụ buso ya agha.”+ 15 “N’ihi na, lee! emewo m ka ị dị obere n’etiti mba dị iche iche, meekwa ka ụmụ mmadụ na-eleda gị anya.+ 16 Ụjọ i mere ka a na-atụ gị na mpako nke obi gị eduhiewo gị,+ gị onye bi n’ebe mgbaba nke dị na nkume dị elu, gị onye bi n’elu ugwu nta. Ọ bụ ezie na ị kpara akwụ́ gị n’ebe dị elu dị ka ugo,+ m ga-esi n’ebe ahụ kwatuo gị,”+ ka Jehova kwuru. 17 “Idọm ga-aghọ ihe ijuanya.+ Onye ọ bụla nke na-agafere ya ga-ekporopụ anya na-ele ya ma fụọ mkpọrọhịhị n’ihi ihe otiti niile e tiri ya.+ 18 Dị nnọọ ka ọ dị mgbe a kwaturu Sọdọm na Gọmọra na obodo ndị dị ya nso,”+ ka Jehova kwuru, “ọ dịghị onye ga-ebi n’ebe ahụ, ọ dịghịkwa nwa nke mmadụ ga-ebi na ya dị ka ọbịa.+ 19 “Lee! Otu onye ga-abịa dị ka ọdụm+ nke si n’obere ọhịa tojuru etoju, nke dị n’akụkụ Jọdan, banye n’ebe ịta nri nke na-adịte aka,+ ma, m ga-eme ka o si n’ebe ahụ gbaa ọsọ n’otu ntabi anya.+ M ga-emekwa ka onye m họọrọ bụrụ onye na-elekọta ya. N’ihi na ònye dị ka m,+ ònye ga-amakwa m aka,+ ònyekwa bụ onye ọzụzụ atụrụ nke pụrụ iguzo n’ihu m?+ 20 Ya mere, nụrụnụ ihe Jehova kpebiri ime Idọm,+ na ihe o bu n’uche ime ndị bi na Timan:+ N’ezie, a ga na-adọkpụrụ ụmụ atụrụ si n’ìgwè atụrụ ha. N’ezie, ọ ga-eme ka ebe ịta nri ha tọgbọrọ n’efu n’ihi ha.+ 21 Ụwa amalitewo ịma jijiji n’ihi ụda ọdịda ha.+ A na-eti mkpu ákwá!+ A nụwo ụda ya ọbụna n’Oké Osimiri Uhie.+ 22 Lee! Otu onye ga-efeli ma fedata n’ike dị ka ugo wee buru ihe,+ ọ ga-agbasakwa nku ya iburu Bọzra;+ n’ụbọchị ahụ, obi ndị dike nke Idọm ga-adị ka obi nwaanyị ime na-eme.”+ 23 Banyere Damaskọs:+ “Ihere emewo Hemat+ na Apad,+ n’ihi na ọ bụ akụkọ ọjọọ ka ha nụrụ. Ha adaala mbà.+ Oké osimiri na-eme mkpọtụ; ọ pụghị ịda jụụ.+ 24 Damaskọs enwekwaghị obi ike. Ọ tụgharịwo ka ọ gbalaga, oké ụjọ ejidela ya.+ Ọ nọ n’ahụhụ, ime na-emekwa ya dị ka nwaanyị na-amụ nwa.+ 25 Olee ihe mere na a gbahapụbeghị obodo nke a na-aja mma, bụ́ obodo na-enwe aṅụrị?+ 26 “Ya mere, ụmụ okorobịa ya ga-ada n’ámá ya, a ga-egbukwa ndị agha ya niile n’ụbọchị ahụ,”+ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru. 27 “M ga-esunye mgbidi Damaskọs ọkụ, ọ ga-erepịakwa ụlọ elu Ben-hedad.”+ 28 Nke a bụ ihe Jehova kwuru banyere Kida+ na alaeze Hezọ,+ bụ́ ndị Nebukadreza eze Babịlọn meriri:+ “Bilienụ gaa Kida bukọrọ ihe ụmụ ndị Ebe Ọwụwa Anyanwụ.+ 29 A ga-anara ha ụlọikwuu ha,+ ìgwè ewu na atụrụ ha,+ ákwà ụlọikwuu ha+ na ngwongwo ha niile. A ga-anapụkwa ha kamel ha.+ Ndị mmadụ ga-etikwara ha mkpu, sị, ‘Ụjọ dị ebe niile!’”+ 30 “Gbaanụ ọsọ, gbaganụ n’ebe dị anya; gbamienụ agbami gaa zoo, unu ndị bi na Hezọ,”+ ka Jehova kwuru. “N’ihi na Nebukadreza eze Babịlọn+ ekpebiwo ihe ọ ga-eme unu, o chepụtawokwa ihe ọ ga-eme unu.” 31 “Bilienụ buso mba tụsaara ahụ́ agha,+ mba nke bi n’obi iru ala!”+ ka Jehova kwuru. “O nweghị ibo ụzọ na ihe ntụchi. Ha bi naanị ha.+ 32 A ga-achịrị kamel ha,+ chịkọrọkwa ìgwè anụ ụlọ ha. M ga-achụsasị ha ebe niile,*+ bụ́ ndị kpụrụ ntutu dị n’agba ntị ha abụọ akpụ;+ m ga-esikwa n’ógbè niile dị ya nso wetara ha ọdachi,” ka Jehova kwuru. 33 “Hezọ+ ga-aghọ ọgba nkịta ọhịa,+ ọ ga-atọgbọrọkwa n’efu ruo mgbe ebighị ebi. Ọ dịghị onye ga-ebi n’ime ya. Ọ dịghịkwa nwa nke mmadụ ga-ebi n’ime ya dị ka ọbịa.”+ 34 Nke a bụ okwu Jehova nke ruru Jeremaya onye amụma ntị banyere Ilam+ ná mmalite ọchịchị Zedekaya+ eze Juda, sị: 35 “Nke a bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, ‘Lee, m ga-agbaji ụta Ilam,+ bụ́ mmalite nke ike ha. 36 M ga-eme ka ifufe anọ ndị si na nsọtụ anọ nke eluigwe fekwasị Ilam.+ M ga-emekwa ka ifufe ndị a busasịa ha.+ Ọ dịghị mba nke ndị Ilam a chụsasịrị achụsasị+ na-agaghị aga.’” 37 “M ga-eme ka ụjọ jide ndị Ilam n’ihu ndị iro ha nakwa n’ihu ndị na-achọ mkpụrụ obi ha; m ga-eme ka ọdachi dakwasị ha, bụ́ iwe m dị ọkụ,”+ ka Jehova kwuru. “M ga-emekwa ka mma agha na-achụ ha ruo mgbe m kpochapụrụ ha.”+ 38 “M ga-edebe ocheeze m n’Ilam,+ m ga-egbu eze ya na ndị isi ya,” ka Jehova kwuru. 39 “Ọ ga-erukwa n’oge ikpeazụ+ na m ga-akpọkọta ndị Ilam a dọọrọ n’agha,”+ ka Jehova kwuru.
^ Otú e si dee ya n’asụsụ Hibru bụ “‘n’ifufe niile,’ ya bụ, n’ebe niile ifufe na-efega.”